Baakad lagu daro Apple TV +, Apple News + iyo Apple Music | Wararka IPhone
Baakad lagu daro Apple TV +, Apple News + iyo Apple Music?
Marka adeegyada Apple ay xoog yeeshaan waxay waxyeello badan u geysan karaan tartanka iyo tani waa si sax ah wixii ku dhacay Apple Music iyo in Apple lafteedu rajaynayso inay ku dhacdo Apple TV + iyo adeegyadiisa intiisa kale. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxa muhiimka ah ee ku saabsan adeegyadan ayaa ah inay gaaraan meelkasta arinta Apple Newsna wali wey xadidan tahay.
In kasta oo ay tani ka dhacdo warbaahinta caanka ah ee loo yaqaan 'Bloomberg', waxay xaqiijinayaan in Apple uu ka fekerayo mideynta bixinta Apple TV +, Apple News + iyo Apple Music, si dadka isticmaala ay ugu wada raaxaystaan ​​saddexda adeeg. Tani xilligan oo keliya laga bilaabi karo Maraykanka, Kanada iyo Boqortooyada Ingiriiska maadaama ay iyagu yihiin kuwa kaliya ee leh adeegga Apple News ee firfircoon ...
Laakiin, Maxaa dhacaya haddii halkii ay ku dari lahaayeen Apple News, ay dhigayaan Apple Arcade? Tani waxay macquul ka noqon kartaa dalal badan oo badan isla markaana mideynta khidmadaha waxay noqon laheyd qodob wanaagsan oo lagu xisaabtamo si loo kordhiyo macaamiisha gaar ahaanna kuwa badan oo adeegsadayaasha leh Apple Music oo hadda ku raaxeysta Apple TV + muddo bilaash ah, Ikhtiyaar in la tixgeliyo.
Adeegyadan rukumashada ah weligood ma ogaan doontid waxaana suurtagal ah in xirmo wadajir ah iyadoo dhammaan adeegyadu ay aad uga codsanayaan dadka isticmaala oo si kadis ah u hel wax yar oo dheeri ah Apple. Sababta ayaa ah midda caadiga ah, waxaa jira noocyo badan oo adeegsadayaal ah qaarkoodna waxay jeclaan karaan muusig laakiin ma haystaan ​​waqti ay ku daawadaan taxanaha Apple TV + ama taa lidkeed. Taasi waa sababta ikhtiyaarkan ay ugu fiicnaan laheyd isticmaaleyaal badan, laakiin wali leh xorriyad uu ku kireysto adeeg si madaxbanaan
Hada ardayda Waxay horeyba u haysteen ikhtiyaar ay ku daawadaan Apple TV + oo la heli karo mahadnaqa rukunka Apple Music, markaa "noocyada kale ee baakadaha" ah ee la heli karo ma noqon doonaan kuwo fog. Xitaa waad ku dari kartaa iCloud ama adeegyada daruur la mid ah si aad uga dhigto kuwa soo jiidasho leh, waan arki doonaa waxa dhaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Baakad lagu daro Apple TV +, Apple News + iyo Apple Music?
Laba iyo tobanka South AirFly Pro ayaa hadda laga heli karaa Apple Store
Apple wuxuu ballaariyaa tirada astaamaha ay siiso kuwa wax duuba